FASHIL: Kaddib Bar-bardhicii Ay Lasoo Galeen Kooxda Inter Milan, Weeraryahanka Barcelona Ee Luis Suarez Oo Xog Fashil Muujinaysa Sii Joogteeyay – GOOL24.NET
FASHIL: Kaddib Bar-bardhicii Ay Lasoo Galeen Kooxda Inter Milan, Weeraryahanka Barcelona Ee Luis Suarez Oo Xog Fashil Muujinaysa Sii Joogteeyay
Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa kaddib bar-bardhicii ay lasoo galeen kooxda Inter Milan halkiisa kasii waday rekoodh iyo xog fashil muujinaysa oo kusoo haystay tartanka Champions League kulamadii ugu dambeeyay.
Luis Suarez ayaa dhibaato weyn ku qaba inuu shabaqa soo taabto kulamada ay martida yihiin ee UEFA Champions League marka laga yimaado inuu si wanaagsan u ciyaaray kulankii Inter Milan isaga oo wali sii wada inuu masuuliyada kooxda qaado kaddib dhaawaca Lionel Messi.
Xogta aadka u liidata ee uu Luis kulankaas sii joogteeyay ayaa ah inuu haatan gaadhay 1,417 daqiiqo oo uusan shabaqa soo taaban kulamada ay kooxdiisa ka baxsan tahay Camp Nou ee Champions League.
Weeraryahanka ree Uruguay ayaa la filayay inuu shabaqa Inter gaadhi doono kaddib markii uu lix gool soo dhaliyay afartii kulan ee ugu dambeeyay si fiicana u buuxiyay booska uu ka maqan yahay Messi.
Suarez oo ku fashilmay inuu bandhigiisii fiicnaa ee La Liga keeno CL ayay ahayd markii ugu dambaysay ee uu shabaqa soo taabto kulan ay marti yihiin wakhti ku beegan Sept. 16, 2015 markaas oo ay kulan ka tirsan heerka Group-yada la dheelayeen Roma.
Guud ahaan 1,150 maalmood ayaa kasoo wareegay markii ugu dambeysay ee uu xiddigani shabaqa soo taabto kulan uu ka baxsan yahay Camp Nou waxaana uu mudadaas kaddib dheelay 15 kulan oo ay marti yihiin walow uusan abaartaas ka bixin.